Shirka Madaxda dalalka Afrika oo ka furmay Magaaladda Bahar-Daar ee dalka Itoobiya[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Shirka Madaxda dalalka Afrika oo ka furmay Magaaladda Bahar-Daar ee dalka Itoobiya[Sawirro]
Magaalada Bahar-Daar ee Dalka Ethiopia ayaa goor dhaweyd waxaa si rasmi ah uga furmay shirka madaxda dalalka Afrika oo looga hadlayo qodobo la xiriira Amaanka Qaaradda Afrika oo lagu casumay Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa inta uu socdo shirku ka jeedin doono khudbad dheer oo uu uga hadlayo Amaanka iyo horumarinta Qaaradda Afrika iyo sidii looga hortagi lahaa kooxaha xagjirka ah ee ka dagaalama geeska afrika.
Shirka Tana Forum ayaa ah shir sanadle ah oo sanad walba martigeliso dawladda Ethiopia waxaana maanta si rasmi ah shirkaasi u furay Raysal-wasaaraha dalka Ethiopia Hailemariam Desalegn , isagoona madasha shirka ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo taaabanaysay , islamar ahaantaana waxaa uu raysal-wasaaruhu madaxda afrika uga mahadceliyey ka qeyb-galka shirka .
Hailemariam Desalegn ayaa wadamada Afrika u rajeeyey Amni, Horumar iyo iskaashi ay ka yeeshaan cadowyada badan ee ay leeyihiin , wuxuuna ugu baaqay in ay u midoobaan sidii ay isu kaashan lahaayeen.
Dhinaca kale shirka Tana Forum ayaa noqonaya sanadkii labaad oo uu Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ka qeyb-galo isaga oo sanadkii hore matalayey guud ahaan Soomaaliya.